एकता जोगाउन सितल निवासमा बन्यो यस्तो रणनीति, भण्डारीका यी २ प्रस्तावमा ओली-नेपालको सहमति ! – GALAXY
एकता जोगाउन सितल निवासमा बन्यो यस्तो रणनीति, भण्डारीका यी २ प्रस्तावमा ओली-नेपालको सहमति !
काठमाडौं – नेकपा एमालेमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आग्रह गरेपछि आज निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित भएको खुलेको छ ।
रावलले शनिबार अपरान्ह अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर आफूहरूले माधव नेपाललाई एकताको लागि दबाब दिइरहेको र पछिल्लो बैठकले पनि एकताको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै नेपालसँग वार्ताको पहल गर्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले शनिबारै महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायत नेतासँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
नेपाल पक्षले आजको बैठक स्थगित गर्न र सदस्यता नवीकरणलगायतका संगठनात्मक काम रोक्न माग गरको थियो । रावलको आग्रहपछि ओलीले बैठक सोमबारसम्मलाई स्थगित गरेको बताइएको छ । तर, माधव नेपालसँगको वार्ता भने तय भइसकेको छैन ।
दुई नेताबीच वार्ता गराएर पावर सेयरिङमा सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि दुवै नेता एक अर्काका सर्त मान्न तत्पर नदेखिएको वार्तामा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
रावलले ओली लगायतका नेताहरूसँग एकता भाँडिने खालका गतिविधि र अभिव्यक्ति बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सदस्यता नवीकरणको काम पनि सहमति भएपछि अघि बढाउन सकिने बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष रावलले शनिबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि करिब ३ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफल एमालेको विवाद र सत्ता गठबन्धनबाट हुनसक्ने राष्ट्रपतिविरुद्धका सम्भावित कदमहरूकै बारेमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान रावललाई आग्रह गरेको बताइएको छ । रावलले पनि एमाले एकताका लागि राष्ट्रपतिको पहल पनि महत्वपूर्ण हुनसक्ने बताएका थिए । भण्डारी र रावल दुवैजना नवौं महाधिवेशनबाट एमालेको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरू विशेषतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका नेताहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन चाहान्छन् । त्यसका लागि एमाले विभाजित हुनुपर्छ ।
एमाले विभाजित हुँदा प्रतिनिधिसभामा ९१ जना सांसद ओली पक्षमा रहेनन् भने सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्छ । तर, महाअभियोग राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभामा एमालेका ३१ जना सांसद छन्, ती मध्ये कम्तीमा २४ जना ओली पक्षमा छन् । त्यो भनेको सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाई पुग्न नदिने संख्या हो ।